देशकै कार्यकारी प्रमुख अस्वस्थ भईरहँदा विकल्प खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more देशकै कार्यकारी प्रमुख अस्वस्थ भईरहँदा विकल्प खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ? - www.khabardabali.com
देशकै कार्यकारी प्रमुख अस्वस्थ भईरहँदा विकल्प खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ?
चैत ३ गते, २०७६ - १५:०७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली अहिले अस्वस्थ अवस्थामै छन् । उनि मृर्गौला प्रत्यारोपण गरेसँगै चिकित्सकीय निगरानीमा आराम गरिरहेका छन् । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सहरुको भनाइअनुसार ओली सामान्य अवस्थामा फर्किन अन्य समस्या नआए न्यूनतम एक वर्ष लाग्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ओलीले पटक–पटक स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश र स्वदेशकै हस्पिटलमा समय बिताएका छन् । गत साउन र भदौमा मात्रै उनी एक महिनाजसो उपचारको लागि सिंगापुर बिताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली असामान्य रुपमै बिरामी बिदामा बसिरहेका बेला कतिपयले विकल्पको कुरा उठाउन थालेका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो व्यक्ति बिरामी भइरहँदा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था र विकल्पबारे उठाइएको आवाजका बीच हामीले नेकपाका नेतासँग कुराकानी गरेका छौं । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु कति उत्तम ? भनि हामीले सत्तारुढ दल नेकपा नेता लालबावु पण्डित, देवेन्द्र पौडेल र सत्यनारायण मण्डलसँग प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था र विकल्पबारे कुराकानी गरेका छन् । नेता त्रय पण्डित, पौडेल र मण्डलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
चैत ३ गते, २०७६ - १५:०७ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीबाट अनिवार्य निकास हुन्छ, अहिल्यै विकल्प खोज्नु हुन्न
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समस्या व्यक्तितग चाहनाभन्दा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । स्वास्थ्य प्रतिकुल हुँदा उहाँलाई अनावश्यक प्रेसर, टर्चर दिने काम गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यलाभको कामना बाहेक अरु केही पनि गर्न सकिँदैन । चिकित्सकहरुको चाहनाअनुसार उहाँलाई केही समय बेड रेष्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालकै सरकारी अस्पतालमा उच्च व्यक्तिको, जीवनको उत्तर्राधमा दोस्रो पटक मृर्गौला प्रत्यारोपण सफल हुनु देशकै लागि गर्वको विषय पनि हो । अब उहाँको स्वास्थ्यले कति दिन्छ, त्यो अहिले नै भन्ने अवस्था छैन । यसको लागि केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उहाँले कुनै विकल्प दिनु होला । त्यसबेलासम्म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना बाहेक केही पनि गर्न सकिँदैन ।
प्रचण्डलाई पार्टीको सम्पूर्ण निर्णय लिन कुनै समस्या छैन् । तर पनि कतिपय कुराहरु दुईजना अध्यक्षबीचमा छलफल र सल्लाह गरेरमात्र अगाडि बढ्ने गरिएको थिए र छन् । एकजना अध्यक्ष बिरामी भएको बेलामा अस्वभनीय तरिकाबाट निर्णय गर्दै जाँदा राम्रो म्यासेज जाँदैन । प्रधानमन्त्रीले सामान्यतया सरसल्लाह गर्ने अवस्थासम्म प्रचण्डले पनि कुरेर बस्नुभएको छ । क्याविनेटले गर्ने कतिपय निर्णयहरु प्रधानमन्त्रीको टिमबाट भइरहेको छ ।
देशमा त्यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आए त्यतिबेला कुनै विकल्प सुल्झिएला । नेकपाभित्र पनि तीन–तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सबै जना नेतृत्व लिन सक्षम पनि हुनुहुन्छ । पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका नेताहरु हुनुहुन्छ । नेतृत्वको क्षमतामा कुनै समस्या छैन । प्रधानमन्त्री आफैं गम्भिर रोगको उपचारमा रहेको हुँदा पद र नेतृत्व छोड्नोस सबै काम हामी गर्छाैं भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यहि कारणले पार्टीमा अलमल भएको हो । केही समयपछि निकास निस्कन्छ ।
बामदेवलाई राष्ट्रियसभा पठाउनेबारे सचिवालयले निर्णय गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई तनाव दिनु ठिक हुँदैन । पार्टीभित्र समिकरण बन्नु र भत्किनु सामान्य कुरा हो । पार्टीमा विभिन्न नेतासँग बहस, छलफल भेटघाट हुनु स्वभाविक हो । जीवित पार्टीमा बहस, छलफल र आआफ्ना पक्षमा मत दायर हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।